लकडाउनमा पनि जन सेवामा मूल प्रवाह - NepaliEkta
लकडाउनमा पनि जन सेवामा मूल प्रवाह
5 May 2020 21 May 2020 Nepaliekta	0 Comments
35073 जनाले पढ्नु भयो ।
किन्नोर । विश्व महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना संक्रमण र त्यसलाई रोक्न भारतमा सरकारद्वारा लगाइएको लकडाउनका समस्याका बीच पनि मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज जनतालाई सहयोग पुर्याउने कार्य गर्दै आईरहेको छ ।
यसै बीच समाजको हिमाचल राज्य समिति अन्तर्गत रिकंग पिओ नगर समितिले रिकंग पिओमा मृत फेला परेका बर्दिया बासगढी निवासी राजेन्द्र मल्लको शव दाहासंस्कार गरेको छ ।
राजेन्द्र किन्नोरको रिकंग पिओ स्थित सुलभ सौचालयमा कार्यरत थिए । स्थानीय प्रशासनले दिएको जानकारी अनुसार ४ मईका दिन राजेन्द्रको अकस्मात निधन भएको थियो । घटनाको जानकारी प्रशासनले मूल प्रवाह नगर समिति रिकंग पिओलाई दिएपछि समाजको रोहबरमा पोष्टमार्टम गरिएको थियो ।
पोष्टमार्टम पछि दाहसंस्कारका लागि प्रशासनले ५ हजार नगद सहयोग दिएको थियो भने, समाजका कार्यकर्ताहरु बीच रु. १५ सय आर्थिक संकलन गरिएको थियो । यसरी सो रु. ६ हजार ५ सय जम्मा भएको भएको थियो ।
लकडाउनका कारणले मृतकका आफन्तजनसँग सम्पर्क हुन नसेको हुँदा समाजको पहलमा निज राजेन्द्र मल्लको दाहसंस्कार गरिएको थियो । उनी थुमनीया बासगढी, बर्दिया निवासी रहेको र बाबुको नाम अमर बहादुर मल्ल भएको जानकारी हुन आएको छ । साथै परिवारमा श्रीमति, भाई र छोरी रहेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ ।
← मार्क्स दुनियाँ भरिका मान्छेका लागि लडे
भारतका नेपालीहरुलाई प्राथमिकता साथ स्वदेश भित्राउ : राष्ट्रिय जनमोर्चा →
दाङका विभिन्न स्थानमा अन्तक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न